Beesha Warsangeli Oo Laguqasbay Inay Gobalka Sanaag Ay Ka Guuraan – Codka Qaranka Tanadland
Codka Umadda Karaamaysan Ee QarankaTanadland.Warbaahinta Tanadland, By: Saxardiid.
[Warsangeli has been defeated by the “Dirty Dhebayaco” seventy years ago, ever since that time they ware enslaved by their conquerors. Subsequently the Warsangeli become subjugated people “low caste” who are subservient to their overlord “Dirty Dhebayaco”. For a long time, they have endured unbearable humiliation and suffering. Finely now Warsangeli can feel some relief to get away from their tormentors because they have chosen “Somaliland Republic” as their new masters].
Beesha Warsangeli waa beel sinji u leh jileec iyo diciifnimo oo (Habarmajeerteen) ah, aqristow bal aan su’aal ku weydiiyee weligaa maaragtay nin Warsangeli ah oo ay raganimo ku jirto?. Su’aashaas jawaabteedu waxaan filahayaa inay tahay “Maya”. Hadaba aniguna hadaan runta idiinsheego weligey maanan arag nin wersangeli ah oo an is iraahdo allaylehe midkaan xoogaa raganimo ah ayaa ku jirta. Yacni waa umad wada calaan ah oo ad isleedahay waxaa loo abuuray in sidii dameerihii loo rarto. Dameeraha beesha warsangeli labada nin ee ugu dameersan waxaa la yiraahdaa (Cabdullaahi Cali Ciid) iyo (Cabdulaahi Axmed Jamac “Ilko-jiir”
Ninka la yiraahdo (Cabdullaahi Cali Ciid) oo sheegta in uu garaad u yahay laf ka mid ah lafaha beesha warsangeli, waa nin haday naf ku qabtaan rag badan oo beeshiisa ah ay hilibkiisa ceeriinka ku cuni lahaayeen. Sababta oo ay tahay (Cabdullaahi) waa niinka iyada oo tolkiis la xasuuqayo, dagaalka xasuuqa ah ee beeshiisa lagu hayo loo adeegsadey oo warbaahinta ka sheegay in beeshiisa la xasuuqo. Yirina “Hala xasuuqo waa Alshabaab’e”. Nasiib daro, (Cabdullaahi Cali Ciid) hadii uu nin raga ahaanlahaa qori ayuu qaadanlahaa oo tolkiisna af iyo adinba waa u ku difaacilahaa. Balse waa dameer la hayste ah oo loo adeegsadey in tolkiis lagu gumeeyo. Wuxuuna la hayste u yahay beesha dhebayaco oo ku adeegata. Marka ay Dhebayacadu dan leedahayn ayey aalaa lahayste (Cabdullaahi) ay sidii tanagii ka dhawaajiyaan.
Dameerka kale ee dameeraha warsangeli ugu caansani waa (Cabdulaahi Axmed Jamac “Ilko-jiir”), inan gumeed “Ilko-jiir” sidaad ogtihiin jileeca beeshiisa aynu ku naqaan buro ayuu isagu dheeryahay taariikhduna waa ay xusi doontaa. Dameer “Ilko-jiir” weligeed waxaa lagu xasuusandoonaa ciidamadii tolkiis jebiyey oo lagu gumeeyey in isaga lagu magacaabay inuu madax ka yahay.
[Sawirka Madaxweyne Mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud “Cadow Jebiye”] Dhowaan taariikhdu markii ay ahayd (26/04/2014) waxaan ka qoray beesha Dhebayaco maqaal, aan uga hadlahayo labada furimood ee ugu dhiigbaxa badan ee uga furan dhanka koonfureed. Waxaan sidookale aqristeyaasha ku wargeliyey, in furinta sadexaad oo ah gobalka (Bini-Jacfarland) ee bariga sanaag aan maqaal gooni ah uga hadlidoono. Hadaba maqaalkaani wuxuu ku saabsanyahay furinta bariga sanaag ee (Bini-Jacfarland). Ayadoo ay saas tahay, ayaa waxaa jira hadana furinta dhanka koonfureed inay hada xiisad cusubi ka taagantahay. Sidaad ogtihiin qolada (Gal Mudug) waxay xayiraad ay saareen garoonka diyaaradaha ee (SG. Axmed Cirday), Kedib markii ay amar soo saareen ah inay gubayaan diyaaradda iskudayda inay soo cagadhigato. Talaabadaas oo loo baahnaa beesha (Sacad) inay waa hore qaado si ay xaqeeda u hesho.
[Calanka Gobalka Binijacfarland Ee Bariga Sanaa] Shalay subax waxaan iskudayey inaan la hadlo taliyaha haysta ciidamada Garoonka diyaaradaha ee (SG. Axmed Cirday), Balse taleefanka (Col. Xassan Cabdile Hiraabey “Xassan Baanjaali”) mashquul buu ahaa oo iimaysan suurogelin inaan la hadlo. Markaas ayaan waxaan la hadlay mid ka mid ah saraakiisha reer Tanadland ee garoonka jooga. Waxaan ninkaas aan ka waraystay maadaama garoonkii ay beesha (Sacad) xirtay, garoonkana loo wadabaahanyahay. Bal halka uu xaal marayo iyo qorshahoodu waxa uu yahay. Nin kaasi wuxuu yiri (Sacad) waxa uu rabo waa u helahayaa weliba iyada oo la baryahayo, garoonkana waa la furahayaa. Talaabada ay hada qaadeena waa’an soo dhaweyneynaa dan weyn ayaana noogujirta.
Ninkaasi wuxuu ii sheegay in agoontu aysan marnaba dagaal diyaar u ahayn ee uu faanku la tegey hadana ay baryootamayaan, maadaama ay garoonka siyaasiyiintoodu ay aad u isticmaalaan. Arinta kale ee muhiimka ah waxa weeye Dhebayaco waa reer jilicsan oo jab iyo halaaga hoodo u leh. Mud. Cabdi qaybdiid maalintii dhaweyd ee uu yiri garoonka (SG. Axmed Cirday) diyaarad danbe ka ay soo degimeysana, naagihii agoota ahaa ee Dhebayacada wixii uur lahaa waa ay dhiciyeen. Ilayn hadii uu dagaaldhaco nimankoodu rag ka’ay dhicinmayaan oo sidii loo qabsanjirey ayaa loo qabsanayaaye. Xaafadda agoonta hada waxaa jooga ergo Dhebayaco ah oo magaalada Garoowe ka yimid kuna dhiirigelinaya beeshooda inaysan magaalada ka qixin. Xaafadda agoonta ee galbeedka Israac oo ah meel dad maxas ah iyo xoolo baylah ahi ay daadsanyihiin, ayaa maalmahaan waxaa ka bilowday qax iyo kala carar. Laakiin marna inay dhebayaco xabad rido lagafilimaayo in iyaga la soo weeraro maahane, Sababtoo ay tahay dhaqan Dhebayaco maaha loogamanabaran inay xabadda ku horeeyaan.`Laakiin xalka keli ahi wuxuu noqonkaraa in beesha (Sacad) la baryo oo la xaalmariyo. Markaasna waxa ay xaqa u leeyhiin ay helaan. Iyagoo libin hagoogan oo nimankii daan – daansiga bilaabay ka libeysteyna ay waxay rabaan ay helaan.
Arinta ugu qosolka badan oo mudo dheer lagu maadsandoono reer (Galmudug) na sharaf iyo guulba u ah waxa weeye, beesha dhebayaco iyadaa u sabab ahayd in garoonka la xiro, iyagaa faanay oo yiri (Cabdi Qaybdiid) oo aan garoonka magaalada Gaalkacyo cid ka xigta iyo cid u diidikarta aysanjirin anagaa u diidney, iyagaana markii danbe baqay oo afkii ay hadalkaas ku yiraahdeen hadana badeley oo is beenshey, iyaga ayaa shir jaraa’id qabay oo yiri anagu (Cabdi Qaybdiid) garoonka inuu ka soo dego uma anaan diidin. Agoontu iyagaa cabsi darteed aduunku hana soogaaro yiri oo anaga iyo Gaklmudug hana kaladhexgalo. Xalay goor fiidkii ahna waxaa isoogaartey inay wax walba siidii lafilayey ay u dheceen. Oo ay reer (Galmudug) garoonka diyaaradaha ciidan iyo shaqaaleba ay keensanayaan.
Beesha Warsangeli Oo Laguqasbay Inay Kala Doortaan Raacida Somaliland Iyo Inay Gobalka (Bini-Jacfarland) Ee Baniga Sanaag Ay Ka Guuraan.
Isbahaysiga gunta (Habarmajeerteen) iyo adoonta ay ku adeegtaan sababta loo abuuray waxay ahayd cabsi, Cabsidaas oo ah in jabkii ay horay ula kulmeen mid ka daran ay ka gaashaantaan. Ninkii araxda ka jebiyey oo kala firdhiyeyna wuxuu ahaa Mujaahid (Daahir Riyaale Kaahin). Waagii uu (Daahir Riyaale Kaahin) araxda ka jebiyey gunta Mahbarka iyo midiidinkooda oo ay taariikhdu ahayd (15/10/2007). Waagaas waa ku dhow ayaa waxaa shir telefoon galay reer Tanadland. Shirkaas ajendihiisu wuxuu ahaa in mawqif midaysan laga qaato sida ugu haboon ee ay reer Tanadland u taageerikaraan Somaliland. Shirkaas waxaa go’aan mideysan lagu qaatay in reer Tanadland ay u ol-oleeyaan sidii uu baarlamaanka soomaaliya u aqoonsanlahaa somaliland inay tahay dowlad madaxbanaan. Iyaga oo beelaha soomaaliyeed ee mawqif ahaan beesha dhebayaco iyo adoomadeeda ay iska soo horjeedaan mawqifkooda midaynaya. Arintaas waxaa loo xilsaaray xildhibaanada iyo siyaasiyiinta reer Tanadland inay fuliyaa.
Reer Tanadland cadowgooda koobaad waa beesha dhebayaco cida dhebayaco xulufo la noqota ama midiidin u noqotana waa noola mid. Sidaas darteed reer Tanadland waxay istuseen in sida ugu sahlan oo beesh Dhebayaco ay furin ugaga furikaraan dhanka waqooyi, inay tahay inay beelaha ay xulufada yiyiin ay abaabulaan xoogana ay saaraan sidii Somaliland loogu aqoonsanlahaa dowlad madaxbanaan. Mudo gaaban kedib waxaa la ogaaday in beelaha soomaaliyeed 95% ay dan u arkaan in Somaliland loo aqoonsado inay Jamuuriyad madaxbanaantahay. Beelaha (Hawiye), (Digil iyo Mirifle), (Dir), (Tanade) iyo (Sade) waxay u arkaan dan diyaarna ay u yihiin in baarlamaanku aqoonsado Somaliland. Hase ahaatee xildhibaanada iyo siyaasiyiinta reer Tanadland waxaa caqabad ku noqday sidii loo helilahaa Madaxweyne iyo Ra’iisalwasaare isku mowqif ah oo aqoonsiga somaliland iskuraaacsan.
Arintaasi in mudaa siyaasiyiinta iyo xildhibaanada reer Tanadland waxay ku ahayd caqabad culus. Hawsha aqoonsiga waxaa ka dhimanaa in la helo madaxweyne soodhaweeya marka uu baarlamaanku somaliland dowlad u aqoonsado. Waxaa kaloo loo baahanyahay in la helo ra’iisalwasaare Daarood ah oo oqoonsiga uu baarlamaanku aqoonsaday Somaliland ayida. Ardhawaale xoogaa horumar ah ayaa dadaaladaas lagagaarey, waxaana aqoonsiga Jamuuriyadda Somaliland ka dhimanayd in la helo ra’iisalwasaare daarood oo ogol aqoonsiga. Caqabaddaas siyaasiyiinta iyo xildhibaanada reer Tanadland si ay xal uguhelaan, waxay shirar kala gooni ah ay la galeen beelaha soomaaliyeed ee ay xulufada yihiin. Waxayna beelahaas ka dhaadhiciyeen inaysan dhicin in uu xilka ra’iisalwasaaraha iyo madaxweynaha uu qabto qof Daarood ah oo aan ahayn (Sade) iyo (Tanade).
Intii uu heshiis kaasi dhacay, Beesha Sade labo jeer oo isku xigta ayey qabatay xilka ra’iisalwasaaraha. Welina nimankii xilkaas qabtay lagamahelin balanqaad ah inay taageerahayaan qorshaha aqoonsiga madaxbanaanida Somaliland. Ra’iisalwasaaraha hada talada haya (Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed) ra’iisal wasaarihii ka horeeyey (Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”) nin fiican buu ahaa, Sida ay sheegeen rag ka agdhawaana waa u aqbalay in beesha harti kalajabinteeda la sharciyeeyo, Laakiin maadaama saacid beesha kablalax uu dagaal kula jirey oo u si cad uga horyimid qolada kuukuuyadu ay wadato ee “Raas Kaambooni”. Saacid wuxuu codsaday bal inta (Kabta iyo Laxda) ay kala tuurahayaan in arinta aqoonsiga Somaliland dib loogudhigo.
Beesha (Sade) iyo beesha (Tanade) waa labo beelood oo weligood xulufo siyaasadeed iyo mid ciidanba lahaa. Guud ahaana xaga fikirka ka midaysan oo arimaha siyaasadda isku mowqif ka istaaga. Arinta aqoonsiga Somaliland na waa arin xasaasi ah oo labada umadoodba muhiimad weyn u leh in la fuliyo. Caadiyan cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibkaa, Gunta (Habarmajeerteen) iyo adoontii midiidinka u ahaa ee ay ku adeeganjireenna nimanka kalajebiyey abaalmarinta ay mudanyihiin in dib loodhigo ma’aha!!.
Ra’iisalwaasaaraha hada talada haya ee (Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed) waa nin aan si fiican u aqaan, Mudane (Cabdiweli) dhaqaaleyahanada soomaalida waa ninka ugu qibrad badan. Mideeda kale ra’iisal wasaare (Cabdiweli) waa nin aanu xidid nahay oo xaaskiisu waa garbar cida (Muumin Aadan) ah. Sida la sheegay (Cabdiweli) beriguu ardayga ahaa wuxuu ahaa arday aad u fahmad badan oo aan kaalinta kowwaad laga qaadin. Intuu bangiga aduunka iyo bankiga islaamka u shaqeynayeyna. Mar kasta jagada loo dhiibo deg-deg ayaa looga badelijirey oo waa la dalacsiinjirey. Sababta oo ay tahay (Cabdiweli) waa nin aad u maskaxbadan oo ku fiican balaandejinta iyo maareynta.
Ilaa sadex xildhibaan iyo dhawr siyaasi oo ka mid ah raga ku hawlan sidii loo aqoonsanlahaa Somalililand, Ayaan waxaan ka waraystay qorshihii ahaa in Dhebayaco furin dagaal loogaga furo dhanka waqooyiga. Nimankaasi kuligood waxay isku raaceen in furin dagaal si loogagafuro beesha dhebaya dhanka waqooyi, in loo baahanyahay in somaliland la aqoonsado. Caqabaddii keliya ee arintaas hortaagneydna hada xal loo helay.
Hadaan arintaas faah-faahin ka bixiyo, waxaad moodaa in wacyiga iyo marxaladda lagujiro ay xalka keentay. Beesha (Mareexaan) ayaamahaan sidii nin uu waran ku taaganyahay ayey u rabaan in wax kasta loo de-dejiyo. Magaalada Kismaayo sidaad ogtihiin waxaa gacanta ku haya ciidamo iskudhaf ah oo kenyati iyo siralyooniyiin isugujira. Ciidankii keenyaatiga ahaa oo beesha kablalax dagaalka kula saftayna hada keligood meesha ma’ay haystaan. Magaalada Kismaayo hada wax maamul ahi kam ay jiraan. Beelaha Magaalada kismaayo degan beel waliba baasha ay magaalada ka degantahay ayey ka talisaa. Ayaantii hore markii ay ciidamada keenyaatigu ay beesha kalalax dagaalka kula safteen, oo ciidamadii beesha mareexaan ay magaalada banaanka uga bexeen. Ayaa waxaa dhacday in beesha kablalax ay sheegteen maamul qiyaali ah oo ka kooban beesha (Kab iyo Lax). Qaasatanna ka kooban beelaha (Reer Warfaa) iyo (Dhebayaco). Balse dad 40 qof ka badan markii lagadiley beesha (Kab Iyo Lax), Oo beelaha magaalada dega ay bilaabeen in wixii xaafadahooda soogala oo qolada maamulka sheegatay ah inay dhegta dhiiga u daraan. Markaas ayey qoladii (Kabta iyo laxdu) ay baqeen oo aagooda inay soo dhaafaan ay joojiyeen.
Waayadii gobalka jubada hoose ay gacanta ku hayeen isbahaysigii dooxada juba, beelaha gobalka iyo magaalada kismaayo degan oo dhan waxaa la siinjirey saamiga ay xaqa u leeyihiin. Dadka gobalka deganina waxay maamulka u hayeen qadarin balaaran. Mooryaanta kuukuuyada ku gabanaya ee (Kab iyo Lax) markii ay kuukuuyadu ay magaalada kismaayo u qabteen. Arinta ugu fooshaxun oo ay magaalada ka sameeyeen waxaa ka mid ahaa in magaalo (80%) ay beesha mareexaan degto, inay yiraahdeen nin adoontii dhebayacada ah oo guriile aad moodid ayaa duqa magaalada noqonaya. Nin kale oo dhebayaco ahna ay yiraahdaan magaalada nabadsugideeda isagaa madax ka ah. Arintaasi beesha mareexaan waran bay ku noqotay sheekobaraleydii Jubaland ahaydna dhagar (Kab Iyo Lax) ayey isurogtey.
Dhowaan beesha (Mareexaan) shir cadow habaabis layiraahdo ayey magaalada kismaayo ka abaabushay, Laakiin iyadu shirkaas kama aysn qaybgelin oo waxay ugu talagashay inay cadowgeeda ku jaahwareeriso. Shirkaas doqon – habaabiska ahi intuu Kismaayo ka socdey beesha (Sade) waxay shirar iyo abaabul kulajirtey beelaha ay xulufada yihiin. Beelaha dega gobalka Jubada hoose iyo beelaha danaynaya in magaalada Kismaayo laga sifeeyo mooryaanta kuukuuyada ku gabanaya, ee aan degaanka J/H u dhalan oo doolaalada ku yimid. Waxaana lagacodsaday inay isbahaysiga cusub ee uu mujaahid (Bare Aadan Shire “Bare Hiiraale”) hogaaminayo ay ciidan ku darsadaan. Hadii ay danaynayaan inay maamulka xalaasha ah ee la damacsanyahay in laga hirgeliyo magaalada Kismaayo ay xubno muhiim ah ku yeeshaan. Beesha (Mareexaan) hada waxaa ka go’an inay beesha (Kab iyo Lax) ay ka sifayso gobalka jubada hoose oo dhan. Waxayna hada u gacan haadinayaan cid kasta oo danaynaysa ol-olaha ay wado. Isbahaysiga ay hada haystaana 5 jeer waa u ka balaaranyahay isbahaysigii (Dooxada Juba). Beesha (Sade) waxaa dhiiga ku kariyey oo aysan weligeed iloobeyn in kuukuuyo lagu soo hogaamiyo oo ay ciidankeedii Kismaayo ka saareen. Beelo badan oo soomaaliyeedna waxaa dhiiga ku kariyey oo aysan marnaba aqbalikarin (Cagdheer) iyo naagihii (Dhebayaco) baa ismoodsiiyey inay kuukuuyadu rag ka dhicinayso oo Kismaayo ka mashxaradahaya.
Madaxweyne (Xasan Shiikh Maxamuud) dadka reer Tanadland aad ayey ula dhacsanyiihii, waxaana hubaal ah in uu yahay madaxweynihii ugu horeeyey ee (Abgaal) ah oo siyaasadiisa dadka reer Tanadland ay la dhacaan soona dhaweeyaan. Qorshaha maamulgoboleedka la rabo in loo sameeyo gobalada dhexe waa hawl qabyo ah oo socota. Hadii aanu nahay reer Tanadlandna ka anu daalimayno sidii looga mirodhalinlahaa.
Aqoonsiga ay aqoonsadeen ra’iisalwasaare (Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed) iyo Madaxweyne (Xasan Shiikh Maxamuud), qorshaha maamulgoboleedka la doonayo in la dhisana sida uu cadowgayagu uga naxay ayaa na’faraxgelisey waana aanu u riyaaqnay. Sida xeeladda ah ee aad qorshaha dowladda ee ku wajahan gobalada jubooyinka iyo gedo ku wadaana waanu la dhacsannahay waana soo dhaweyneynaa. Waxaan kaloo u riyaaqnay sida aad guntii (Habarmajeerteen) uga boohiseen. Laakiin mid ogaada, Xulafadiinu weli waa ay idin dhaliilsanyihiin idinkugumana ay qanacsana.
Marka hadaad rabtaan in sanadka 2016 -ka dib la idiin soo doorto waa in aad beesha dhebayaco dhanka waqooyo aad dagaal uga furtaan. Si qorshahaasi uu u fulana waa in dowlad madaxbanaan aad Somaliland u aqoonsataan. Dhanka koonfureed iyo barina anagaa balan qaadayna inaan dagaal uga furo oo aysan Dhebayaco bawdyogaab hali uga harin.
Biyodhaca Qormada :-
Bariga Sanaag iyo Sida Ay Uga Hirgashay Siyaasadda “Dad Baa Guura Ee Dhul Ma Guuro” : –
Dadka reer Tanadland ninka ay siyaasiyiinta soomaalida ugu jecelyihiin waa mujaahid (Axmed Maxamed Maxamuud “Siilaanyo”) oo ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Dadka reer Tanadland mujaahid (Axmed Maxamed Maxamuud) waxay u yaqaaniin “Cadow Jebiye”. Sababta aanu uga jecelnahay mujaahid “Cadow Jebiye” siyaasiyiinta kale ee reer somaliland waxa weeye waa nin hawlkar ah oo waxqabad badan. Jamuuriyadda aynu deriska nahay ee (Somaliland) waxay mudo dheer lahayd siyaasad ay ku dhaqanto oo la yiraahdo “Dad Baa Guura Ee Dhul Ma Guuro”. Siyaasadda ah “Dad Baa Guura Ee Dhul Ma Guuro” waxay ka hirgashay labo gobol oo ka tirsan gobolada bari ee Somaliland. Sida Bariga gobolka Sanaag iyo gobolka Sool. Ninka ugu fir-fircoon ee siyaasadda Somaliland gobolada bariga somaliland ka hirgeliyeyna waa mujaahid (Axmed Maxamed Maxamuud “Cadow Jebiye”).
Degaanka (Bini jacfarland) ee bariga sanaag waxaa wada dega labo beelood oo soomaaliyeed, Beeli waa beesha afraad ee ugu muhiimsan beelaha dega gobalka sanaag ee reer (Bini Jacfar) ama (Sh.Cabdiraxmaan Bini jacfar “Ugaaslabe”). Beesha (Ugaaslabe) oo ah beel beelaha reer (Sh. Isixaakh) iyo (Daarood) la siman waxaa magaalada ceerigaabo la dega beelaha (Habaryoonis), (Habar Jeclo) Iyo (Naaleeye Xamed). Degaanka bariga sanaagna beesha (Ugaaslabe) waxaa la dega beel harti ah oo la yiraahdo Warsangeli. Beesha Warsangeli markii ay xulufo la noqotay beesha dhebayaco. Beesha (Ugaaslabe) iyaduna waxay ku biirtay jamuuriyadda Somaliland waxaana loo qarameeyey ciidan xoog leh. Beesha (Ugaaslabe) mudadii ay dhisnayd jamuuriyadda Somaliland si weyn ayey dhanwalbaba uga faa’iideen. Halka beesha warsangeli oo aan lahayn wax beecmushteri ah lagu jebiyey oo loo adeegsadey wiilashoodii ay beesha dhebayaco midiidinka uga dhigeen.
Intaas waxaa weheliya in (Axmed) madaxweyneyaashii ka horeeyey ay beesha (Ugaaslabe) u balanqaadeen, in hadii beesha warsangeli ay diido kamidnoqoshada Somaliland degaanka (Bini Jacfarland) laga sifayndoono. Balse madaxweynihii ugu horeeyey oo degaanka (Bini Jacfarland) ee bariga sanaag ka fuliyey siyaasadda “Dad waa guuraa ee dhul ma guuro”, wuxuu ahaa mujaahid madaxweyne (Axmed Maxamed Maxamuud “Cadow Jebiye”). Mujaahid “Cadow Jebiye” markuu talada qabtay xilka wasiirka gaashaandhiga wuxuu u magacabay (Axmed Xaaji Cali Cadmi) oo ka soo jeeda gobalka Bini-Jacfarland. Taariikhdu markii ay ahayd (16/03/2014) mujhid “Cadow Jebiye” oo u weheliyo wasiirkiisa gaashaandhiga (Axmed Xaaji Cali Cadmi), ayaa waxay booqasho ku tageen magaalada (Laasqoray). Magaalada (Laasqoray) na waa magaaladii ugu horeysey ee umada (Ugaaslabe) ay ka dhisaan bariga sanaag. Sidaas darteedna waxay magaalada (Laasqoray) ay caasimad u tahay gobalka (Bini-Jacfarland).
Degaanka (Bini-Jacfarlan) Iyo Beesha Warsangeli Mawqifkeeda Ku Aadan Siyaasadda Somaliland Ee “Dad waa guuraa ee dhul ma gooro”
Beesha Warsangeli waa beel sinji u leh jileec iyo diciifnimo oo (Habarmajeerteen) ah, aqristow bal aan su’aal ku weydiiyee weligaa maaragtay nin Wrsangeli ah oo ay raganimo ku jirto?. Su’aashaas jawaabteedu waxaan filahayaa inay tahay “Maya”. Hadaba aniguna hadaan runta idiinsheego weligey maanan arag nin wersangeli ah oo an is iraahdo allaylehe midkaan xoogaa raganimo ah ayaa ku jirta. Yacni waa umad wada calaan ah oo ad isleedahay waxaa loo abuuray in sidii dameerihii loo rarto. Dameeraha beesha warsangeli labada nin ee ugu dameersan waxaa la yiraahdaa (Cabdullaahi Cali Ciid) iyo (Cabdulaahi Axmed Jamac “Ilko-jiir”)
[Sawirka Dameer Cali Ciid] Ninka la yiraahdo (Cabdullaahi Cali Ciid) oo sheegta in uu garaad u yahay laf ka mid ah lafaha beesha Warsangeli, waa nin haday naf ku qabtaan rag badan oo beeshiisa ah ay hilibkiisa ceeriinka ku cunilahaayeen. Sababta oo ay tahay (Cabdullaahi) waa niinka iyada oo tolkiis la xasuuqayo, dagaalka xasuuqa ah ee beeshiisa laguhayo loo adeegsadey oo warbaahinta ka sheegay in beeshiisa la xasuuqo oo yiri “Hala xasuuqo waa Alshabaab’e”. Nasiib daro, (Cabdullaahi Cali Ciid) hadii uu nin raga ahaanlahaa qori ayuu qaadanlahaa tolkiisna af iyo adinba waa u ku difaacilahaa. Balse waa dameer la hayste ah oo loo adeegsadey in tolkiis lagu gumeeyo, wuxuuna la hayste u yahay beesha dhebayaco oo si foolxun ugu adeegata. Sidii tenagiina u garaacata oo uga dhawaajisa marka ay la hadlayso adoomada hartiga ah ee ay ku adeegato.
Dameerka kale ee dameeraha Warsangeli ugu caansani waa (Cabdulaahi Axmed Jamac “Ilko-jiir”), inan gumeed “Ilko-jiir” sidaad ogtihiin jileeca beeshiisa aynu ku naqaan buro ayuu isagu dheeryahay taariikduna waa ay xusi doontaa. Dameer “Ilko-jiir” weligeed waxaa lagu xasuusandoonaa, ciidamadii tolkiis jebiyey oo lagu gumeeyey in isaga lagu magacaabay inuu madax ka yahay. Xakhiiqduna waxay ahayd “Ilko-jiir” maaha nin ee waa calaan dameer ah oo ay beeli ku adeeganayso. Dhebayaco markay “Ilko-jiir” tolkiis ku gumeysey oo ay dantii ay ka lahayd ka gaadhey ayey xariga intay ka furtay ay siideysey. Hadii aynu rumaysano warka ay qortay warbaahinta Somalilandsun.com. Dameerkii “Ilko-jiir” ahaa iyo gacanyarihiisiiba, maysan lumin ee xero reero kale ayey ku jiraan oo ay midiidin u yihiin. Ninku markuusan nin ahayn tolna uusan lahayn ee uu inangumeed yahayna noloshaas fooshaxun ee dameernimada ah ayuu ku waaraa.
Dad badan ayaa waxay yiraahdaan (Maxamed Siciid Atam) uma uusan dhalan Warsangeli ee waa ay korsadeen, sababta oo ay tahay (Atam) waa nin ay xiniinyo rag ku jiraan, Warsangelina ka dhiiran, Sideedabana (Maxamed Siciid Atam) waa nin aaminsan in uu nin gob ah yahay. Waa nin diidey in uu midiin u noqdo naagiihii Majeerteen, ee ba’ay-ba’ay oaranjirey oo geedaha jibaaxijirey markay rag muuqooda arkaan. Xiniinyaha iyo raganimada ku jirta (Maxamed Siciid Atam) waa sababta beesha uu sheegto ee Warsangeli ay ku dayrisay.
Laakiin Warsangeliga dhaladka ah ee aynu naqaani waa xoolo la dhaqdo oo rabaayad ah. Marka aynu aragnana waa mar ay reero kale xerada ugu jiraan oo ay ku shaqaysanayaan sidii dameerihii. Ayaan waxaa lagayaabaa inay guntii dhebayaco xarada ugu jiraan oo ay ku adeeganayso. Ayaan marka aad joogtana waxaad arkaysaa iyagoo xero isaaq ku jira oo waxaad isleedahay ma colbaa soo dhacay duunyadaan?. Labodaraadle, marka hada ah wareegacadayntii uu Warsangeli hadba reer u cararijirey oo uu ayaamo midiidinka u noqonjirey waa ay ka soo oodantay. Waxaana lakala dooransiiyey inuu labo daran mid doorto.
1. Inuu jamuuriyadda somaliland uu daacad u noqdo dad keedana uu ka midnoqdo.
2. Inuu degaanka bariga sanaag ee (Bini Jacfarland) uu ka haajiro oo uu laajinimo ku noolaado.
Marxalad daasi markii ay soo foodsaartay Warsangeli, warsangeli wuxuu doortay in uu somaliland isu dhiibo, calanka astaanta u ah somaliland -na uu guudka saarto. Oo isaga oo ku heesahaya “Somaliland dalkayga, Somaliland Dadkayga uu somaliland isu dhiibo. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay saraakiisha iyo ciidamada somaliland ee degaanka (Bini Jacfarland) oo ka soo jeeda beesha (Ugaaslabe). Iyaga dani uguma ay jirto in uu Warsangeli Somaliland uu isu soo dhiibo oo ay dalka la wadaagaan. Beesha (Ugaaslabe) in isbahaysigii (Mahbarka) iyo Midiidinkoodu uu jabay, Awooda Somaliland-na araxda looga jebiyey waa ay ogsoonyihiin. Marka reer (Bini Jacfarland) dantoodu waxay ku jirtaa in Warsangeli uu raaco beesha dhebayaco ee gumeysey si degaanka (Bini Jacfarland) Warsangeli looga sifeeyo.
Warsangeli markii uu go’aan ku gaarey in uu Somaliland isu dhiibo si’aan degaanka (Bini Jacfarland) oo ay beesha (Ugaaslabe) la degaana aan looga cayrin. Beesha (Bini Jacfarland) oo dad reer somaliland ah oo dhab ah laguna kalsoonyahay ah. Waxay beesha (Warsangeli) diiwaanka u gelisey inay yihiin dad xabadi keentay ah oo aysan somalilandnimadu aysan dhab ka ahayn. Una baahan in dhaqancelin loo sameeyo si ay uga dhaadhacdo wadaniyad iyo Somaliland jacaylku. Markaas ayaa Warsangeligii somaliland isudhiibey inta meel oomasoore ah la geeyey waxay naftu uga baxday haraad. Sidii loo gaardisiinayey iyaga oo ku qaylinaya “Somaliland Dhulkayga, Somaliland Dadkayga” Calanka somaliland na kor u sida.
Arinta kale ee layaabka lihi waxay tahay, Bal in uu Warsangeli yahay dad gobanimo ka quustay oo gunimo qaayibey. Mashruucii dhaqancelinta oo markuu Warsangeli isdhiibey loogu talogalay in lagu xasuuqo si ay somaliland uga quustaan, oo markay qaxaan ay dhebayacadii haysanjirtey ay ugu qaxaan. Degaanka (Bini Jacfarland) na ay uga guuraan ayey sidii dabkudhicii ugu daateen. Markaas ayaa waxaa dhaxday in Warsangeligii dhaqancelinta loo sameeyey ay ku go’een oo haraadka u laayey. Markaas ayaa xoogaa firxad ah oo ka haray waxay u cawdeen TV xaaraamiga ah ee (Somali Chanel) ninka iska leh, TV gaas oo u leeyahay mid nacas ah oo mahbar “Ey” ah. Markaas ayey ku booyeen oo waxay yiraahdeen niman reer (Bini Jacfarland) ah oo raba inay dhulka (Bini Jacfarland) naga cayriyaan ayaa haraad nagu laayey, ee ina adeerow madaxda Somaliland-na kama ay warqabaan xaaladayada ee nooga wargee!!, ina adeerow dowladda Somaliland inaan soocararnay gaarsii, inaan kabo iyo direys aan weli u baahanahay oo nalala soo gaarana ku wargeli. Hadynu ehel nahay oo ay na dhashay islaantii waalayd ee fuleynimada u dhimatay markay maqashay rag baa arada yimid.
Waxaad moodaa Warsangeli inuuba ilaawey wixii gobanimo la oranjirey, Xarago dhimatay, gunimana uu qaayibey. Rag qayrkiis ah oo la siman ayuu owal u xeraysnaa oo u ka soo baxsaday, Hadana reero kale ayuu sidii xoolo baadi ah u xerooday oo siday doonaan ka yeelahaya. Xoriyad intay raasanlahaayeena waxay idaacadaha la soo fariisteen indho-adayggooda, oo ay baryahayaan kabo iyo tuutihii lagu gumeysan lahaa oo ay qayrkood midiidinka ugu noqonlahaayeen.
Maxaysatada Warsangeli ee lagu sanduleeyey inay ciidamada Somaliland isudhiibaan oo ka cabanaya taliska ciidamada gobalka Bini Jacfarlad ee Somaliland.
Maqaal hore oo aan ka qoray beesha dhebayaco sida sahlan ee ay Warsangeli u gumeysey markii labaad mudo todobaatan sano ah gudahood, waxaan ka soo sheekeeyey sida diciifnimada ah ee Warsangeli hubka inta laysugu dhiibey laysugu jebiyey. Laakiin maantay waxaan idiikaga sheekaynayaa qiso murugo leh oo ku dhacday labo nin oo ilma adeer ah oo weriyeyaal ah. Si xunna laysugu adeegsadey oo laysugu dhuftay.
Qisada Labada Eariye Ee Beesha Warsangeli Ku Dhacday Waxay La Midtahay Sidii Beesha Warsangeli Laysugu jebiyey Oo Kale.
Warsangeli Wayska Ari-Buureerd (Lama)
Warsangeli waa reer aad u ayaandaran, waa reer tolnimo aan isuguhiilin oo dhaqan tolnimo aanan lahayn. Waa reer halyeygooda marka uu cadow helo sidii lo’gisidii uga kalacarara oo aan hiil lahayn. Waa reer ugaar baas ah oo mid waliba calooshiisa u shaqaysto uuna nin qayrkiis ah midiidin u yahay. Hada ka hor waxaan maqaal ka qoray sidii Dhebayaco 70 sano ka hor ay uga adkaatay oo ay u gumeysey. Waxaa kaloo aan maqaal dheer ka qoray sida ay markale uga adkaatay oo ay u gumeysey sanadkii 2010 -ka. Waxaan kaloo ka soo sheekeeyey sida Warsangeli ragoodii la xiniinyobixiyey tolkood loogu jebiyey. Dabcan xogtaasina maaha aniga mid igu kooban oo waad la wadasocotaan intiina badan wax idinku cusubna maaha. Waxan maqaaalkaas aan ku lifaaqay oo la socdey sawiro foolxun. Oo ah Warsangeli inta dhulkiisii loogutegey sidii ugaartii la ugaarsaday oo la soo laayey, markaasna inta maydkoodii la soo bur-buriyey kawaan magaalada Bosaso ku yaala marar badan lagu soo bandhigay. Iyadoo ujeedadu ay tahay Warsangeli oo ah reer diciif ah in la bajiyo. Iyadoo ay sidaas tahay ayaa waxaa laga yaabaa in qayb ka mid ah dadka reer Tanadland oo an xogogaal ahayn in marka ay maqaalkaan arkaan ay ka xumaadaan. Oo ay is yiraahdaan “War waxa duliga ahi muxuu reerka oo dhan u caayahayaa?”. Maya saas maaha, waxkasheegna igama aha ee waa xaqiiqadu siday tahay. Waayo Dhebayaco siday Warsangeli u gumeyneysey oo ay u xiniinyobixineysey, Warsangeli wuxuu noqday sidii bahal buuraleyda Laatiin Amerika ku nool oo la yiraahdo (Lama) oo ay indiyaanku rartaan. Calashaan sida nimankaas hebedka loogagadhigay oo dadnimada loogaga saaray ayey (Lama) la midnoqdeen.
Bilowga Sheekada Labada Weriye :-
Waxaa lagayaabaa badankiinu inaydnaan weligiin shaahid ku arag sheekana aydnaan xataa ku maqal rag la xiniinyobixinayo. Laakiin waxaan idiinhayaa qiso ku dhacday labo nin oo Warsangeli ah oo kawaan loo samaystay in beeshaas lagu xiniinyobixiyo lala tegey. Oo markii midiyihii lagu qalilahaa loo soo qaatay oo ay afka gacanta saareen argagax dartiis, Ay nimankii midiyaha u soo qaatay inay xiniinyobixiyaan ay sawir ka qaadeen. Maalintaasna waxaa meeshaas lagu xiniinyobixiyey (Jaamac Ayaanle Feyte) iyo aabihiis (Ayaanle Feyte). Maalintaas (Jaamac) iyo aabihiis (Ayaanle Feyte) waxay xoolo unoqdeen beesha dhufaanatay, Waxayna ku biireen beel wada dhufaanan oo laga dhameeyey hal nin oo rag ah oo xiniinyo leh. Waxayna ka mid noqdeen waxaas ari-buureedka (Lama) -da ah ee Warsangeliga lagu sheegayo.
Taas waxaa ka siidaran danta lagalahaa oo loo xiniinyobixiyey weriye (Jaamac Ayaanle Feyte). Weriye (Jaamac Ayaanle Feyte) sidaan ku aqiiney intuu xiniinyaha lahaa, wuxuu ahaanjirey wiil dhiiran oo ficilo leh tolkiisna inuu difaaco warbaahinta (Galgalanews.com) u furtay. Wuxuu ahaanjirey nin aragti xor ah iyo damiir dadnimo leh, Wuxuu taageerijirey halganka xaqa ah ee u tolkiis kulajirey Dhebayaco. Wuxuu ahaanjirey codka xorta ah ee ugu dheer oo u tolkiis hayso. Markaas ayaa nimankii uu halganka kulajirey ay go’aan waxay ku gaareen, inay isaga iyo aabihiisba intay xiniinyobixiyaan ay hebad rabaayad ah ka dhigtaan sidii bahalkii Lama-da ahaa. Markii (Jaamac Ayaanle Feyte) la dhufaanay, ayaa intaas loogagama harin’e waxaa laguyiri aanu ku siideynee midka nacaska ah ee Warsangeli oo mareegta (Allsanaag.com) leh ma weerareysaa?.
Aqristow bal adiguba malee Warsangeli la xiniinyobixiyey oo (Lama) noqday oo la yiri intaas iskufuro wuxuu falilahaa?. Oo ogsoon sida tolkiis rag la mid ah oo la xiniinyobixiyey looga horgeeyey oo loogu gumeeyey. Magaalada (Birmingham) ee wadanka Uk waxaa degan nin doqon ah oo aad u liita oo taageerijirey halganka xaqa ah ee uu tolkiis ku jiro. Nin kaas Warsangeli intaan tolkiis laga adkaan oo aan la gumeyn halganka wuxuu u qaabilsanaa dhanka warbaahinta. Websaydka fadarada noqday hada ee (Allsanaag.com) na wuxuu ahaanjirey warbaahin xor ah oo ku hadasha codka xornimodoonka Warsangeli. Arinta la yaabka leh ee aysan dad badani ogeyn waxa weeye labadaas nin ee Warsangeli, midka iska leh mareegta (galgalanews.com) waa la xiniinyobixiyey kan kale oo mareegta (Allsanaag.com) lehna maskaxda ayaa laga haystaa oo ruux xor ah ma aha.
[Sawirkaan Fooshaxun waa (Jaamac) iyo aabihiis (Ayaanle Feyte) oo kawaanka Warsangeliga lagu xiniiyobixiyo ee magaalada Bosaso jooga. Ninka sawirkaan fooshaxun ka qaadayna waa ninkii Dhebayaco ee isaga iyo aabihiisba xiniinyobixiyey]. Jaale (Jaamac Ayaanle Feyte) waxaa la xiniinyobixiyey sanadkii (2009) – ka horaantiisii, Waxaana xiniinyobixiyey wiil dhebayaco ah oo sida aabihiis indhohabeeno ah lana yiraahdo (Maxamed Cabdiraxmaan Faroole). Dabcan nin kasta oo dhebayaco ahi wuxuu ogyahay in nin ah reerka ay u bixiyeen (Dhabar Macaan). Oo ah reerka keliya ee ay beesha Dhebayaco weligeed ka adkaatay. In ay sidaydoonaan ay ka yeelikaraan, Wax alla iyo waxay doonaana ay ku samaynkaraan. Deerana aysan deero u hardiyeynin cadad kasta oo ay Warsangeli kibir ugaga laayaan. Jaale (Jaamac) iyo aabihiis (Ayaanle Feyte) na waa’ay ogsoonyihiin oo waa sababta ay afka gacanta ugu hayaan.
Dhebayacana Warsangeli waa ari-buureed (Lama) ay iska leeyihiin oo ay sidaydoonaan ay ka yeelaan. Markaasna waxay ahayd markii ay Warsangeli gumeeyeen oo ay Warsangeligu isdhiibeen. Sidaas darteed beesha Dhebayaco si ay nacaska Warsangeli ee iska leh Allsanaag.com ay maskaxda ugaga qabsadaan oo ay ugu adeegtaan. Waxaa keliya oo ay u baahdeen inay meeshiisa jabsadaan una sheegaan inay ogyihiin magiciisa oo sadexan iyo magaalada uu deganyahay ee (Birmingham). Iyaga oo islahaa intaas hadaad samaysaan adoon ayuu idiin noqonayaa oo Warsangeliga Xaq-udirirka ah ayuu ka soo horjeesanahayaa. Nasiibdaro, sidii ay Dhebayacadu filahayeen ayaa dhacday ilayn Warsangeli rag maaha oo wayska Ari-buureed’e.
Taariikhdu markii ay ahayd (02/02/1012) -ka ayuu dhufaan (Jaamac Ayaanle Feyte) jabsaday warbaahinta beesha Warsangeli ee (Allsanaag.com), Markii uu jebiyeyna waxay ku amreen nimankii xiniinyo bixiyey ee uu la’haystaha u ahaa inuu webka tolkiis hawlgab ka dhigo. Dhufaan (Jaamac Ayaanle Feyte) wuxuu geliyey websaydka (Allsanaag.com) run ahaantii maqaal hawlgab ka dhigay. Maqaal kaas oo ku saabsan ninka odayga ah ee Warsangeli oo iska leh websaydka (Allsanaag.com), Nin kaas oo uu ku sheegay oday asaasaqay oo qaraab ah in uu yahay. Wuxuu maqaalkaas ku qoray in mareegta (Allsanaag.com) lala wareegey isaga oo calanka Somaliland ka taagey.
Islamarkiiba wuxuu lahayste Jaamac uu webkiisa www.galgalanews.com soo geliyey maqaal kale oo uu horay u diyaarsaday. Uuna ugu talogalay in uu mulkiilaha mareegta (Allsanaag.com) ku bajiyo. Lahayste (Jaamac Ayaanle Feyte) wuxuu maqaalka uu webkiisa soo geliyey uu uga faalooday mulkiilaha mareegta (Allsanaag.com). Isaga sheegay magiciisa oo sadexan iyo magaalada Birmingham ee dalka UK oo uu deganyahay. Wuxuuna ku sheegay oday qaraab ah oo wax qadiyad ah aanan lahayn oo caadaqaate ah. Walow uu markii dabe magiciisa maqaalka ka saaray oo uusan hada ku qorayn.
Rag alow bal maleeya waxa uu nin rag ah oo intaas oo xumaan ah lagu sameeyey uu ku caranlahaa oo uu ku carobaabi’i lahaa?. Nin ogsoon in tolkiis nimankii 70 sano ka hor gumeeyey inay mar labaad gumeeyeen, Nin ogsoon in tolkiis laysku jebiyay oo gumeyntooda qayb ka mid ah loo adeegsadey, Nin ogsoon in ina’adeerkiis (Jaamac Ayaanle Feyte) uu nin dhibane ah oo la xiniinyo bixiyey uu yahay oo aan wax denbi ah lahayn, codowgiisuna uu ugu shaqaysanayo sidii ay Warsangeli ugu jebiyeen adoonta kala ah (Cabdulaahi Axmed Jamac “Ilko-jiir”), (Cabdi Jamaal) iyo (Cabdullaahi Cali Ciid). Nin ogsoon sababta loo weeraray oo warbaahintiisa loo jabsaday inay tahay in la bajiyo oo uusan u taageerin Warsangeliga gobanimodoonka ah ee uu hogaaminayo (Maxamed Siciid Atam).
Marka waxaan islahaa ninka Warsangeli markuu uguyaraado intuu baangad iyo bastoolad gato ayuu raadsanlahaa meel ay dhebayaco ku kulanto, oo wax uu madaxa ka toogto iyo wax uu baangad surka ugajaro ayuu ka dhigayaa.
Nasiibdaro, Warsangeli waa dad la rabaayadeey oo awooweyaashood la xiniinyobixiyey. Inay iskood u shaqaystaana waxay ka jecelyihiin in lagu shaqayto oo waa umad gunimada qaayibtey oo aan dhaqan gobeed lahayn. Waa beel dhan oo aan nin dhiig lihi uusan ku harin oo hal doorkeedii qararka Majayahan iyo Galgala lagu laayey. Warsangeli waxaa u haray rag la rabaayadeeyey oo la xiniinyobixiyey, Rag tolkood hadii agtooda lagu qalanayana aan ka dhiidhiyikarin oo looharo ah. Ninka mareegta (Allsanaag.com) iska lihina waa nin Warsangeli ah oo sifihii tolkiis leh. Ujeedadii mareegtiisa in la jabsado laga lahaana waa laga gaarey. Waxayna ahayd u jeedadaasi in uusan Warsangeliga xorta ah ee halganka xaqa ah ku jira uusan taageerin, ee uu taageero beesha tolkiis gumeysey ee Dhebayaco. Waana sababta layaabka leh ee dhufaan (Jaamac Ayaanle Feyte) iyo dhibanaha iska leh (Allsanaag.com) ay Warsangeliga xorta ah uga soo horjeedaan, Geesiga hubka u qaatay inuu tolkiis Mahbarka ka xoreeyo ee (Maxamed Siciid Atam) iyo Warsangeliga xorta ahna ay u necebyihiin.
Xaaladda fooshaxun iyo gunnimada ay ku jirto beesha Warsangeli hadaan intaas uga baxo, dhowaan mudo sanadkaan aynu ku jiro bilowgiisii ah ayaa waxaa magaalada garoowe iga soogaarey aqbaar. Aqbaartaas oo ah in beesha Dhebayaco ay la shireen mid doqon ah oo Dhulbahante ah. Ninka Dhulbahante ee la yiraahdo (Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar). Waxaa igu maqaalo ah in nacas kaas laguyiri “Maxamuud Garaad” ka quusanay oo Somaliland bay naga raaceen, ee wiilashii (Faarax Garaad) oo (Aadan Madoobe -Habarjeco) iskadhiciyey dagaalkii (Kalshaale) manoo keeneysaa aanu xoogaa luf-luf ah ku siinee?”. Markaasuu (Cabdixakiin) wuxuu ku jawaabey hadaad nimanka mushaar siinaysaan niman (Faarax Garaad) ah oo idiinshaqeeya la waayimaayo. Markaasay Dhebayacadii waxay ku tiri “War nimanka mushaar baanu siinaynaa ee noo keen”. Markaas ayuu nacaskii Dhulbahante wuxuu Dhebayaco u geeyey 150 nin oo tolkiis ah.
Reerka Dhulbahante la yiraahdana waa reer kun iyo kow jeer haday Dhebayaco been u sheegto oo ay qatasho aanan lagayaabin inay waqood baraarugaan. Nimanka waxa halkaas geeyeyna waa salfudayd iyo aaminaad ay aamineen tuute inay ku shaqaystaan oo ay nin qayrkood ah midiidin u noqdaan. Amarna ay ka qaataan oo siduu doono uu ka yeelo marba hadii uu qutulyoonkooda kafaalaqaado.
Mudo 6 bilood ah ayaa nimankaas inta meel oomasoore ah lagu xereeyey ay darxumo, haraad, baahi iyo macaluul ay u adkaysanayeen, oo marka ay yiraahdaan “mee mushaarkii nalayiri waa laydinsiinahayaa” la lahaa “Ma maqasheen wax mushaar qaata?, dadka badankoodu labo sanaddood iyo bar mushaar maysan qaadan welina waa ay sugayaan ee nimanyohow fudaydka iskadaaya hadaad nootimaadeene”. Arintaas fooshaxun markii ay dhacday ayaa waxaa ka faa’iideystey niman dulaaliin ah oo beesha (Maxamuud Garaad) ah. Nimankaasi dowladda Somaliland intay la xiriireen ayey waxay ka iibiyeen nimankii reer (Buhoodle) ee Dhebayaco u xeraysnaa. Nimankaas oo u markii hore nacaskii (Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar) ahaa Dhebayaco ka iibiyey. Arinta ugu fooshaxun oo la yaabka lihi waxa weeye, in nimankii (Faarax Garaad) ee lahaa “Wax Somaliland la yiraahdaa ma’ayjiraan ee waa beel Isaaq la yiraahdo, oo lahaa Isaaq ayaa na soo weeraray oo 300 oo nin noogadiley dagaalkii (Kalshaale). Wixii u haray maanta waxay ku biireen ciidamada qaranka ee Somaliland. Arintaasna waxaa u sabab ah oo kalifay balanfuryada Dhebayaco.
Halkaan hoose ka daawo saraakiisha beesha (Maxamuud Garaad) ee walaalahood (Faarax Garaad) soo samatobixiyey, kana soo badbaadshey darxumadii iyo meeshii oomasooraha ahayd ee ay Dhebayaco ku ooday. Kuna soo dhaweynaya ku soo biiridda ay ku soo biireen ciidamad qaranka ee Somaliland.
Danta aan ka leeyahay qormada maqaalkaan waxa weeye inaan dadkayga xusuusiyo inuu cadowgeenii jabay, Inaan umadda karaamaysan ee reer Tanadland aan xasuusiyo in wixii Harti la oranjirey uu daadku qaaday oo ay ceel dheer ku dhaceen, In guntii Habar – majeerteen ee aynu weligeenba garaacijirney ay dhulka inootaal oo ay inoo dagantahay, Inay godoonsantahay oo aynu meelkasta ka soo oodnay, inay keligeed tahay oo aysan gargar iyo garab toona haysan. Inaguna aynu meel kasta xulufo siyaasadeed iyo isbahaysi sal balaarn aynu ku yeelanay. Inaynu maanta haysano fursad aynu ku cidibtiro cadowgeena soojireenka ah ee Dhebayaco. In aan tolkay xusuusiyo in maanta Dhebayaco Ari-buureedkii xataa laga kaxaystay oo ay xero nin kale ku jiraan. In ay soodhawaatey maalin aynu waxbadan sugeyney, Inay soodhawaatey markii aynu cidibtirilahayn gunta Habarmajeerteen.
Naagaha (Habarmajeerteen) waxaa la filayaa in dhawaan guluf dagaal lagu kiciyo. Dagaal kaasna beelaha reer Tanadland waxaa la filayaa inay si weyn ugu guuleystaan. Xaalkuna uu noqondoono “Weligiba Nin Geed Adag Goobta Waa U Harijirey”.
Maqaalkaan xogwaranka iyo guubaabada ah ee ku socda umadda karaamaysan ee reer Tanadland, wuxuu ka midyahay maqaalo dhowr ah oo aan ugu magacdaray “Gunta Habarmajeerteen Mindhaa Gawda Kamadeyno”.
6th March 2015, 2:55 pm
6th March 2015, 2:56 pm
6th March 2015, 2:57 pm
6th March 2015, 2:58 pm
Maxaad Kala Socotaa Heshiiska Iskaashiga Ciidamada Somaliland iyo UK? – Codka Qaranka Tanadland
24th July 2016, 2:53 pm
[…] Post Quote […]